Madaxweyne Xasan oo Kismaayo gaaray - Wargeyska Faafiye
Madaxweyne Xasan oo Kismaayo gaaray
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxmauud iyo wafdi uu hoggaaminayo oo ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa saakey gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose.
Madaxweynaa ayaa ka qeyb galay furitaanka shirka dib-u-heshiisiinta bulshada ku nool gobollada Jubada Heese, Jubbada Dhexe iyo Gedo oo ka furmaya magaalada Kismaayo.
Maamulka Kumeel-gaarka ah ee Jubba ayaa qaban qaabiyay shirkaan oo ay dowladda dhexe ku leedahay dowr. Dhawaan dowladda Soomaaliya ayaa ku guuleysatay inay isu keento dhinacyadii isaga soo horjeeday maamulka Jubbooyinka.
Qeybaha kala duwan ee bulshada iyo masuuliyiinta maamulka kumeel-gaarka ah ee Jubba ayaa u diyaar garoobaya soo dhaweynta madaxweynaha iyo wafdigiisa sida uu ku soo warramayo Maxamed Xasan Xiis oo ka tirsan Radio Muqdisho.
Wixii warar ah ee ku soo kordha waan idiin soo gudbin doonnaa hadduu Alle idmo.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsCiidan boolis oo Kismayo laga howlgalinayo.Dagaal Culus ayaa kasocda magaalada BaraaweDhalinyaro lagu tuhmayo inay ka tirsanyihiin Al-Shabaab oo la soo xir xirayAbuu Muscab oo digniino u jeediyay reer Muqdisho.Diyaaradaha Dalka Kenya oo Duqeeyey fariisimo eey leeyihiin Al-Shabaab